एउटा निरंकूशता फाल्दा डरलाग्दो निरंकूशतामा फसियो
भालुको कान कतिञ्जेल समातेर बस्ने ? छाड्यो कि टोकिहाल्छ, सिध्याइहाल्छ । भालुको कन्पट बन्यो संघीयता ।संघीयतालाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले भनेका छन्– घा“टीमा अड्केको हड्डी बन्यो संघीयता । कांग्रेस, एमालेका केही नेताहरुको मान्यता पनि यही छ । संघीयताकै कारण धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषागत भासमा भासिदै जान थालेको छ मुलुक ।
संविधानसभामा मस्यौदामाथिको छलफल सकिएर संशोधनका भोलि भदौ १९ गतेसम्मको समय छ, राजनीतिक विवाद झन झन चर्किएर गएको छ । बन्द, हड्ताल, नाराजुलुस सर्वत्र बढ्दै गएका छन् । यहा“सम्म कि चारदलको संगठनबाट फोरम लोकतान्त्रिकका विजय कुमार गच्छदारलेसमेत भोलिसम्ममा मधेसीका माग पूरा नभए संविधानसभाको सबै प्रक्रिया छाडिन्छ भन्ने निर्णय सुनाइसकेका छन् ।
१७ जनाले ज्यान गुमाइसके । राज्य अझै निरंकूश बनेर सेना परिचालन गरिरहेको छ । कहिलेसम्म र कहा“सम्म गर्ने सेना परिचालन । सैनिक परिचालन गरेर संविधान जारी गर्ने ? यसकारण बहस उठ्यो– नेपालको आवश्यकता संघीयता हो कि विकेन्द्रीकरण ? यसबारेमा अर्जुनदृष्टि राख्न नसक्दा देश द्वन्द्वमा पस्न पुगेको छ ।
६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक हुनासाथ बढेको विवाद ७ प्रदेश हु“दा झन चुलिएको छ । खण्ड अखण्ड र भाषा पहिचानको माग ह्वात्तै बढेर गएको छ । जनता आन्दोलित हु“दा तिनलाई दबाउने नाममा केही जनता र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको छ । पश्चिमाको डलरको डकारले जातीय र धर्मनिपरपेक्षतावादीहरुको अहंकार बढाइदिएको छ । मुलुक आगोको ज्वाला र धुवा“को मुस्लोमा निसास्सिन थालिसक्यो ।
विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा १२६ जाति र १२३ भाषीहरु छन् । कुनै पनि गाउ“, नगर, जिल्ला अथवा क्षेत्रमा एउटै जातिको बाहुल्यता छैन । र, यथार्थ के पनि हो भने दलित, सिमान्तकृत, शोषणमा परेका जाति र भाषी छन्, शोषक र शोषित छन्, बर्ग संघर्षको स्थिति छ । यसको निदान संघीयता हो कि शोषित बर्गको हित रक्षाको बैकल्पिक मार्ग निकाल्नुपर्ने हो ? संघीयता हु“दैमा बर्गसंघर्ष संवोधन हुनसक्दैन भन्ने थाहा भएर पनि हाम्रा राजनीतिक नेताहरु स्वयं दिग्भ्रमित हुनपुगे । मुलुकमा संघीयतासहितको संविधानको सुगा रटान गर्दागर्दै रगत पो बग्न थाल्यो ।
जनआन्दोलनको सफलता प्राप्त हुनासाथ राजनीतिक दलहरुले मनखुशी धर्मनिरपेक्षता अन्तरिम संविधानमा लेखिदिए । बिना लोकमत किन यसो गरियो ? यसबारेमा राजनीतिक नेतृत्व जिब्रो चपाउ“छ, बोल्न सक्दैन । यथार्थ के हो भने जनआन्दोलन सफल पार्न भेटिकनदेखि भेटी आएको थियो, भेटी पचाउन हिन्दूराष्ट्रको शव्द फेरेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेखियो । त्यसपछि लगातार चर्चहरु खोलिदै गएका छन्, धर्मपरिवर्तन भइरहेका छन् र नेपालमा इसाईकरणको बाढी नै आएको छ ।
धार्मिक सहिष्णु मुलुकमा धार्मिक आक्रोस बढ्दै छ, धार्मिक द्वन्द्वले रक्तपात मच्चिने खतराका आहट पनि सुनिन थालिसकेका छन् । कहिल्यै धर्म राजनीतिक एजेन्डा बनेको थिएन, संघीयतास“गै धर्म पनि राजनीतिकरण मुद्दा बनेको छ, सडकमा धार्मिक राजनीति सुरु भइसक्यो । संविधान निर्माणको मुख्य अड्चन भनेकै जातीयता, क्षेत्रीयता, अखण्डता र धर्मनिरपेक्षता हो । यी चार विषयमा राजनीतिक नेताहरु जबसम्म प्रष्ट हुनसक्दैनन्, संविधानसभाबाट प्रष्ट चित्र प्रकट हु“दैन, तवसम्म संविधान घडीको रालो हल्लिएझै“ हल्लिरहनेछ । देशले निश्चित बिधि र पद्धति पाउन सक्नेछैन । शान्ति र प्रगतिको फलामे ढोका खुल्नेछैन ।
विदेशी समाजवादीभित्रमात्र होइन, मधेसवादी वा वामपन्थीवादीहरुको चुलो चौकोमा पलेटी कसेर बसिसकेका छन् । लोकतन्त्रवादीको मुखुण्डो लगाएर वा नलगाएर अतिवादीहरुको पकेटखर्च, मधेसी नेताको बिखण्डनवादी वा आन्दोलन गर्ने गराउने खर्च विदेशीले नै भर्ने गरेकोमा कसैलाई शंका छैन । समाजवादी वा बर्गीय राजनीतिभित्र जातीय वा धार्मिक राजनीतिक आगो विदेशी पैसाले किनेको सलाईको का“टीले लगाइरहेको छ ।
कांग्रेस, एमाले वा मधेसी दलहरु लोकतन्त्रको साइनबोर्ड झुण्ड्याएर कम्युन्यालिजम, माफियातन्त्र, भ्रष्टाचार बढाइरहेका छन् । एक नेपाललाई सुसंगठित बनाउ“छु भनेर एकजना नेता पनि शीर ठाडो पारेर उभिन सकेका छैनन् । परजीवी भएपछि परालखुट्टे हुनु स्वभाविक हो । देश आगोको लपेटमा परिसक्दा पनि सम्हाल्न नसक्ने नेताहरुको दयालाग्दो स्थिति देख्दा यिनले जतिसुकै जनमतको धक्कु लगाए पनि यिनले जनताको विश्वास गुमाइसके भन्दा फरक पर्दैन । जनता आक्रोसित छन्, नेताहरु आ–आफ्नै डम्फु बजाएर किंकर्तव्यविमूढ छन् । विदेशीहरु नेपाली नेपालीलाई उचाल पछार गरेर रमाइरहेका छन् । कहा“ छ पार्टी र नेताको निर्णय क्षमता ? नेपालको राष्ट्रिय हित र एकता किन खण्डिकरण भइरहेको छ ? संघीयताको हड्डी घा“टीमा अड्किनाले वल्लो किनार न पल्लो तीर हुनपुगेको छ संविधानसभा ।
संघीयता छाडेर अघि बढ्न सकिन्न । संघीयतासहितको संविधान जारी हु“दा पनि जनताबाट अमान्य हुने खतरा छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जनमत संग्रह गराउने हो भने हारिन्छ भनेर ठूला ४ चाल त्यो जोखिम लिन पनि चाहदैनन् । अलिनो पनि नखाउ“, नूनढिकी पनि नफोरौं भन्दा राजनीतिमा अन्यौल र देशभरि अराजकता फैलिरहेको छ । आयोग बनाएर संघीयताको निक्र्यौल गर्ने हो भने संविधानमा न्यूनतम सहमति हुनसक्छ । संविधानभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरुलाई वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरिसकेका छन् । वार्ता सुरु पनि भइसक्यो । तर, वार्ताले आकार पाउला ? चार ठूला नेताको जमिन्दारीजस्तो बनेको संविधानसभा देखेका शक्तिहरुलाई सत्ताधारीप्रति पटक्कै भरोसा देखिदैन ।
हो, संविधानसभा ज्यू“दै थियो र छ । सभाको मान मर्दन गर्दै चार पार्टीले १६ बु“दे सहमति गरे । यो सहमतिको उपज हो संविधानको मस्यौदा । यो मस्यौदामा उल्लेखित संघीयतालाई सहमति गर्ने मजफो लोकतान्त्रिकले चुनौति दिइसक्यो । एमाओवादीका नेता उपनेता प्रचण्ड र बाबुरामवीच शक्तियुद्धले छाया“मा पारिसकेको छ भने मधेसी दलहरु र कांग्रेसकै केही सदस्यले समेत कान निमोठीरहेका छन् । एमाले त नरसंहार भए होस्, संविधान जारी गरेर सत्ताको लगाम हातमा लिन चाहिरहेको छ ।
प्रचण्डले राष्ट्रपति बन्न ¥याल चुहाएका छन् । १६ बु“दे भनेको ट्वाक्कै भन्दा लोभीपापीहरुको घडा हो । जुन घडा फुट्दा संघीयता र धार्मिक विवाद बढेर रगतको खोलो बग्ने खतरा देखिदैछ । पहिले बाइसे र चौविसे राज्य थियो, एकीकरणपछि एक नेपाल बन्यो । अव संघीयताको खुकुरीले नेपाललाई कित्ताकाट गरेर टुक्य्राउन खोजिदैछ । एक नेपाल र एक नेपालीको शक्ति निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक नेताहरु असफल भए । यहा“सम्म कि जनताको असन्तुष्टिलाई सामुहिक रुपमा संवोधन गरेर शान्तिपूर्ण वार्ताको वातावरण बनाउन समेत चार राजनीतिक दलहरुले चासो दिएका छैनन् । लाग्छ, मुलुक एउटा निरंकूशता हटाएर डरलाग्दो निरंकूशतामा प्रवेश गरेको छ । यो अन्धकार यात्राले कतै भीरबाट नेता लडे त केही छैन, मुलुकै झ¥यो र झ¥यामझुरुम भयो भने ?